Depiote ho an’ny fanovàna : Manery ny RNM sy TVM hiaraka amin’ny “miara-manonja” -
AccueilSongandinaDepiote ho an’ny fanovàna : Manery ny RNM sy TVM hiaraka amin’ny “miara-manonja”
Depiote ho an’ny fanovàna : Manery ny RNM sy TVM hiaraka amin’ny “miara-manonja”
30/04/2018 admintriatra Songandina 0
Manao bontolo. Izay no azo ilazana ireo depiote ho an’ny fanovana hivondronan’ny Tim sy ny Mapar ary ny MMM. Raha ny zava-nitranga ny sabotsy 28 avrily teo mantsy, nidina ary tonga teny amin’ny ORTM misy ny Radio nasionaly (RNM) sy ny Televiziona malagasy (TVM) ireto milaza fa depiote ho an’ny fanovana ireo. Tamin’izany indrindra anefa no nanereny ny tompon’andraikitra tao amin’ny ORTM handray azy ireo. Tsy nisy ny fangatahana alalana fa avy hatrany dia bontolo no nidiran’izy ireo tao an-toerana. Tsy vitan’ny bontolo fa miampy tsy fahalalam-pomba tamin’ny alalan’ny vava navoaka sy ny fomba fiteny sy firesahana tamin’ireo tompon’andraikitra.
Ankoatra izay, noteren’izy ireo hiaraka amin’ny “miara-manonja”, hitambaran’ny haino aman-jery Viva sy Kolo ary Free Fm, ny RNM sy ny TVM. Amin’ny fomba ahoana moa no ahafahan’izy ireo manery ny haino aman-jerim-panjakana hiaraka amin’ireo haino aman-jery tsy miankina? Raha izay no tian’izy ireo atao dia tokony hoterena hiditra ihany koa ireo haino aman-jery hafa.
Marihina etoana fa tsy afaka miditra amin’ny haino aman-jerim-panjakana ny olon-drehetra manam-pikasana hanao zavatra sy hiteny amin’izany raha tsy mahazo alalana amin’ny tompon’andraikitra. Ireto voalaza fa depiote ho an’ny fanovana sady misolo vava ny vahoaka avy amin’ny misy azy tsirairay ireto anefa dia manao an-tery sy am-boletra fotsiny tsy amim-pahalalam-pomba.
Tsy misy fiovana fa dia toraka izay tsy misy valaka mihitsy anefa no nataon’ny MLE teny amin’ny Antenimieram-pirenena, teny Tsimbazaza, roa taona lasa izay. Fanafihana andrim-panjakana no azo hilazana izany, ary toa izay ihany anefa ny zava-nitranga tetsy amin’ny ORTM satria rehefa navela malalaka izy ireo, tsy misy intsony ny fanajana olona sy ireo tompon’andraikitra mpiandry raharaha tao an-toerana. Izany ve no atao hoe solombavambahoaka sy depioten’i Madagasikara?
Miakatra any an-doha ve ny aretim-pahefana sa ahoana? Apetraka amin’i Andry Rajoelina izany fanontaniana izany, taorian’ny tafa nataony tamin’ny Jeune Afrique farany teo ka nilazany hoe: “Le drame de ce pays, c’est que les différents ...Tohiny